Marketing Analytics 101: ငါ့ကိုငွေပြပါ။ | Martech Zone
Marketing Analytics 101: ငါ့ကိုငွေပြပါ။
အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 30, 2008 အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 16, 2016 Douglas Karr
ပြီးခဲ့သည့်လက Talent Zoo အတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့စဉ်ကကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သည် အလိုအလျောက်နှင့်ပေါင်းစည်းမှုပြုကြရန်တွန်းအားပေး သင်၏အွန်လိုင်းမဟာဗျူဟာများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်ခြင်းများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီရန်ကုမ္ပဏီများသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်အခွင့်အလမ်းများကို.
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ Andrew Janis ဆီအီးမေးလ်ပို့လိုက်တယ် Evantage အတိုင်ပင်ခံ Whitepaper အသစ်တစ်ခုကိုသူတို့ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးရလဒ်များသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအနှစ်ချုပ်အချို့ကို Andrew မှသူပေးပို့ခဲ့သည့်အီးမေးလ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်လည်းထိုအရာကိုမပြောနိုင်ပါ။ )
စျေးကွက် Analytics မှ၏ပြည်နယ်
ဤ Whitepaper ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ထုတ်ရန် Evantage Consulting မှပြုလုပ်သောစစ်တမ်း၏ရလဒ်များကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည် analytics စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များနှင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအပေါ်။
အဆိုပါစာတမ်းကုမ္ပဏီများသည်ဖို့အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုပိုမိုမြှုပ်နှံနေစဉ်ကတင်ပြထားပါတယ် analyticsလူအများစုကအချက်အလက်များကိုအရေးယူမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်စိန်ခေါ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ မြို့ပြတွင်စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သော်လည်းရလဒ်များသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးတွင်တသမတ်တည်းဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
အများစုမှာစျေးကွက်ဖြစ်ကြသည် ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း analytics နှင့်အရင်းအမြစ်များသို့သော်အချက်အလက်စုဆောင်းထားသည့်စျေးကွက်သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်အဖွဲ့အစည်းအများစုတွင်လက်တွေ့မကျသေးပါ။
ယူကြသူထိပ်တန်းအဆိုတော်အုပ်စုတစ်စုရှိပါတယ် ဒေတာ - မောင်းနှင်စျေးကွက် နှလုံးသားအတွက်
စီမံခန့်ခွဲမှုသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ် ဒေတာ - မောင်းနှင်သောစျေးကွက်သို့ကူးပြောင်းခြင်းတွင်၎င်းသည်တက်ရန်နှေးကွေးသည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအပေါ်အကောင်းမြင်အမြင်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည်နည်းပညာကိုအမှန်တကယ်အားဖြည့်တင်းရန်၊ ရလဒ်များကိုတိုင်းတာရန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စတင်ရန်စတင်နေကြသည်။ သူတို့ကစတင်နေကြသည် နားလည်ပါတယ်! အစုလိုက်အပြုံလိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်သေပြီဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်ပေါ်မှပစ်မှတ်ထားသောစျေးကွက်ရှာဖွေမှုများတိုးပွားလာသည်။
တိုက်ရိုက်နှင့်ဒေတာဘေ့စ်စျေးကွက်သမားများကဤကိစ္စကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအော်ဟစ်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည် Jerry McGuire ရှိ Cuba Gooding ကိုကျွန်ုပ်အား `ငွေပြပါ! 'ဟုအော်ဟစ်ရန်သတိပေးသည်။ ကုမ္ပဏီတိုင်း၏ဥက္ကpresident္ဌသည်သူတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနသို့တူညီသောစကားများကိုအော်ပြောသင့်သည်။
ဤသည်သည်စားသုံးသူများအတွက်သာမကစျေးကွက်အတွက်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများသည်ပစ်မှတ်ထားပြီးအမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိသောကြော်ငြာများကိုတွေ့သောအခါ၎င်းတို့သည်တုံ့ပြန်ကြသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကမှန်ကန်တဲ့အပြုအမူကိုလုပ်တဲ့အခါ၊ သင်ချိန်ညှိမရပါက ပြောင်းလဲမှု ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ၊ ရလဒ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာသင်ဟာမြားကိုအမှောင်ထဲထဲပစ်ထည့်လိုက်တယ်။
Whitepaper ကို Marketing Analytics မှ Evantage မှကူးယူနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ 1999 ကတည်းက Evantage အတိုင်ပင်ခံ e- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သူတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်အိုင်တီအစိတ်အပိုင်းများကိုချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်မှုရရန်မည်သို့ကူညီခဲ့သနည်း။ အများဆုံးထိရောက်မှုနှင့်ထိရောက်မှုသည်။
Tags: ပိုက်ဆံအရောင်ကျိုက်ထီးရိုးevantage အတိုင်ပင်ခံပိုက်ဆံပြပါအဖြူစက္ကူWhitepaper
ငါအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကြီးထွားလာပြီးလူမှုမီဒီယာကို ဦး ဆောင်နေတယ်
1:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 6, 29
ငါအရာအားလုံးပို။ ပို။ ပစ်မှတ်ဖြစ်လာသည်သဘောတူသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ပြီးကြော်ငြာရွေးချယ်မှုများကိုလေ့လာနေသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ဒေတာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေသည်။ မည်သည့်ကြော်ငြာများကကလစ်များကိုနှိပ်ကြသနည်း။ ထိုအခါအဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်ကလစ် နှိပ်၍ မရသောအရာများကိုအစားထိုးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်စျေးကွက်ကဘယ်သူလဲ၊ သူတို့အမှန်တကယ်မြင်ချင်တာကိုအခြေခံသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်လူများသည်ကြော်ငြာကိုမုန်းကြသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏ပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာများကိုဤမျှကာလပတ်လုံးထိုးဖောက်ခံထားရခြင်းကြောင့်သာငါခံစားမိသည်။ အကယ်၍ သင်ပစ္စည်းများကို၎င်းတို့ရှေ့တွင်သူတို့အသုံးဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိလျှင်၎င်းတို့သည်သင်၏ကွန်ရက်ရှိရရှိနိုင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုသင်၏ကြော်ငြာများထည့်ခြင်းအဖြစ်မြင်လိမ့်မည်။